Xilliga Xagaaga ee Daroogooyinka • Dawooyinka Inc.eu
1 Baaritaanka haramaha ee Nederland
2 Dagaal cusub oo daroogada ah
3 Propaganda ka Tilburg
Xagaagii lasoo dhaafay, wax badan ayaa ka dhacay qeybta siyaasada maandooriyaha.
Baaritaanka haramaha ee Nederland
Golaha wasiirada ayaa leh Degmooyinka 10 loo qoondeeyay inay kaqeybqaato tijaabooyinka lagu beero haramaha: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg iyo Zaanstad. Isku soo wada duuboo waxay ku saabsan tahay Dukaamada qaxwada ee 79, dhammaantoodna waxaa dhowaan keeni doona daaqayaasha ay u magacowday Gobolku. Qariidada hoose waxay ku siisaa dulmar guud oo ku saabsan faafida juqraafi ee Nederland.
Dulmar guud ee degmooyinka kaqayb galaya 10 weed tijaabo ah oo lala yeeshay dukaamada qaxwaha ee 79 ee Nederland (ilaha)
Ugu dambeyntiina, 23 ee wadarta degmooyinka 355 waxay shaaciyeen inay danaynayaan kaqeybgalka tijaabada weed. Qayb ka mid ah degmooyinkaas ayaa ku lug yeelan doona tijaabada iyada oo la xakameynayo degmooyinka.
Hadda waa muhiim in tijaabada biilku si dhakhso ah u xidho silsiladda dukaanka kafee golaha guurtida la daaweynayo. Kaliya markaa beeralleyda ayaa loo magacaabi karaa. Guddiga koowaad ee Caddaaladda iyo Amniga waxay leeyihiin 2 bisha 2019 Sebtember jawaabta oo faahfaahsan helay. Habka dheeriga ah waxaa looga wada hadli doonaa 10 Sebtember 2019. Guddiga Guurtida ayaa markaa go’aaminaya sida diyaarinta sii socota ay u sii socoto iyo goorta daaweynta guud ee biilka la qabanayo.
Dagaal cusub oo daroogada ah
Xiga farriinta in xaflado yari ay yaalliin si looga hortago isticmaalka daroogada iyo a cilmi baaris ay sameysay The Economist taas oo muujisay in haramaha sharci-darrada ahi u horseedo iibsi dheeraad ah oo keeg ah iyo iibinta khamri yar, waxaan ka nixinnay dhamaadka xagaaga by warbixin 'cabsi leh' waxaa qoray borofisar Pieter Tops iyo saxafiga baaritaanka badan ee Jan Tromp, cinwaankiisuna yahay 'Achterkant van Amsterdam'.
Sida laga soo xigtay warbixinta 75 milyan oo euro oo ah maandooriyaha maandooriyaha loo yaqaan ayaa loo isticmaalaa sanadkiiba magaalada Amsterdam. Balaayiin ayaa la sameeyaa oo lacagta daroogada ayaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo guryaha, dukaamada iyo goobaha cuntada. Rabshadaha qallafsan ayaa si joogto ah loo adeegsadaa. Dadka dhalinyarada ah waxaa loo isticmaalaa inay iska ilaaliyaan macaamil ganacsi sharci daro ah ama inay u adeegaan waraaqo maandooriyeyaal ah. Caasimaddu waxay ku jirtaa dambiyo abaabulan dagaalkiina ka dhanka ah ayaa dhammaantood lumay.
Waan ognahay Mr Tops kuwii hore u soo iibsaday, kuwaas oo uu ku andacooday in soo wareejinta Dutch ee daawooyinka isku dhafan ay gaarayaan ugu yaraan 18,9 bilyan. Baadhitaan dhaw, warbixintaasi waxay noqotay mid si ku saleysan sal u leh on quicksand taasina kama duwana warbixintan. Bart de Koning wuxuu ku soo gabagaboobay falanqayn aad u wanaagsan oo warbixinta ah La Soco Lacagta in warbixintu ay kuxirantahay fikradaha, dhagaysiyada, jarista wargeysyada, ilo aan la garanayn iyo sheegashooyinka aan la sheegi karin.
Nasiib wanaagse, marwada iyo marwooyinka siyaasiga ah ee The Hague ma ahan kuwo dhaliil leh. Gaar ahaan, waxay u arkaayaan sinnaantooda (damiirkooda) ee lagu xaqiijiyay warbixintan waxayna ku dhawaaqayaan dagaal cusub oo ka dhanka ah daroogada, taas oo aan cidna loo tudhin, oo ay ku jiraan isticmaaleyaasha. Waa inay naftooda ka xishoon waayaan, sababtoo ah waxay ilaashadaan dambiga dhaqankooda. Waqtiga su’aasha Golaha Wakiilada Bishii Sebtember 3, Ms Van Toorenburg (CDA) waxay u dhigtay sidan soo socota: "Haddii, marka lagu daro tallaabooyinka uu wasiirku si sax ah u qaadayo, aanan si isku mid ah ula hadlin dadka isticmaala, markaa ka guuleysan mayno dagaalkan." Waa inay jirtaa olole macluumaad iyo qaab adag oo ku wajahan dadka isticmaala, adoo u diidaya inay galaan ciidaha iyo soo bandhiga ganaaxyo ka sareeya.
Sida laga soo xigtay Ton Nabben (HvA) ayaa muujinaya tufaaxa niyadda gaar ahaan adeegsadayaasha awood-darada darawalada. Iyada oo laga jawaabayo dhammaan dhibaatooyinka ka jira The Hague waxay tilmaamaysaa Tom Blickman (TNI) in dagaal cusub oo daroogada ah uusan micno lahayn gabi ahaanba. Haddii aan la xakamayn suuqa daroogada, dagaalka lagula jiro dambiyada abaabulan ayaa fashilmi doona. Wuxuu casharro ka soo qaataa wixii la soo dhaafay wuxuuna xusayaa "inay caqli-gal tahay in loo maleeyo in soo noqnoqoshada joogtada ah ee siyaasadaha fashilmay markan ay shaqeyn doonto".
Xitaa Peter R de Vries (RTL) wuxuu aaminsan yahay in siyaasiyiinta Nederland ay tahay inay bartaan sida loola macaamilo xaqiiqda. Daawooyinka si fudud ayaa Nederland looga isticmaalaa. Wasiirka ayaa soo wicin kara xitaa kooxo boolis oo dheeri ah iyo ciqaab adag. Laakiin waxaan ku aragnay dagaalka ka dhanka ah daroogada ee Mareykanka XNUMX-kii sano ee la soo dhaafay in aysan wax saameyn ah ku yeelan gabi ahaanba. Waxba iskama beddelin. "
Nasiib darrose, fariintooda lama siinin booliska (k). Si faragelin adag loogu sameeyo la dagaalanka dambiyada daroogada, qawaaniinta asturnaanta qaarkood waa in xitaa lagu tuuraa dusha sare, sida laga soo xigtay Amsterdam taliyaha booliska Frank Paauw.
ka CDA xitaa way rabtaa in urur gaar ah oo ladagaalama daroogada laga aasaaso Nederland. Kooxdaas cusub waa in xitaa la siiyaa 'adkeysi' si ay macluumaad uga helaan dambiilayaasha. Haddii ay jiraan caqabado xagga sharciga ah, waa in laga saaraa. Marka la soo koobo, si loo ilaaliyo xukunka sharciga, waa in la tirtiraa.
Propaganda ka Tilburg
Waxaa la joogaa waqtigii xiriirka ka dhexeeya Jaamacadda Tilburg iyo CDA mar la wada hadli lahaa. Professor Pieter Tops iyo xubin ka tirsan baarlamaanka Madeleine van Toorenburg labaduba xiriir ayey la leeyihiin jaamacada Tilburg, sida xubno kale oo badan oo caan ka ah CDA. Waxay umuuqataa shaki si la mid ah shaqo la isku raacay. Tops waxay daabacdaa warbixin leh gabagabo xiriir dhaw la leh hadalada CDA. Marka xigta, CDA waxay ku dhawaaqdaa talaabooyin adag, iyadoo la tixraacayo warbixinta Tops.
Tani waxay mar ahaan ahayd eray cajiib ah dacaayadda. Tani waa nooc isgaarsiin oo ay xiiseynayaan kooxda xiiseyneysa inay ku guuleysato taageerayaasheeda fikradeeda iyagoo ku ciyaaraya aragtida dadweynaha. Tan waxaa lagu gaaraa iyada oo si ula kac ah loo qaybiyo macluumaad mideysan ama been abuur ah.
Iyada oo loo marayo warbixinnada 'Pieter Tops', waxaa si isa soo taraysa loogu gelayaa dagaal aan macno lahayn oo ku saabsan daroogada; dagaal ku saleysan fikradaha iyo damqashada. Marka taa la ixtiraamo, dagaalka mukhaadaraadka waa sida dagaal dhab ah. Waxaan aragnay ku-takri-falidda iyo diidmada xaqiiqooyinka ka hor Dagaalkii Vietnam iyo xaq-u-dirirkii Dagaalkii Ciraaq, halkaas oo joogitaanka hubka baabi'inta badan, oo isu beddelay gebi ahaanba aan jirin, laga wada hadlay.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo bedeli karo dagaalka ka dhanka ah daroogada, sida bixinta sharciyeynta ee XTC. Tan waxaad ku siineysaa isticmaaleyaal bedel ah, si aysan mar dambe ugu noqon dambiilayaasha. Cadaadis badan iyo dulqaad la'aan eber ayaa leh saameyn ka soo horjeedda. Sida laga soo xigtay Warbixinta Daroogada Adduunka ee Qaramada Midoobay Waligeed ma dhicin in xashiishad, kookeyn iyo dawooyin macmal ah oo intaa la eg suuqa lagu soo galiyo qiimo jaban iyo daahir saa’id ah. Natiijada kaliya ee ka soo baxda dagaalkan cusub ee daroogada ayaa ah in dhawaan dad badan ay bilaabi doonaan isticmaalka daroogada, in daroogadu xitaa ka sii fiicnaan doonto kana jaban tahay, iyo in dambiilayaasha ay xitaa lacag badan heli doonaan. Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin dacaayadaha Pieter Tops iyo CDA.
cannabiscocainedembigo'aan qaadashodaroogadaEuropaKHLAsharci ahaansharci-dejintamdmaNederlandmukhaadaraadka synthetictijaabinta haramahabaaritaanka weedxtc
Emails ayaa cadeynaya in beeraleyda Irish ay la xiriireen Waaxda Caafimaadka si ay ula hadlaan ...
Ton ayaa qoray:
10 September 2019 ee 21: 03
Ha die Kai, haa horeyba waxaan u lahaa dareen noocaas ah oo ay wax badan kaga soo bandhigaan daaha gadaashiisa. Waxay igu dhacdaa in dushooda badanaa lagu casuumo shirarka cda. Runtii waa ganacsade anshax leh oo sii wadaya inuu ku faafo argagaxa. Waan fahmi waayey in Halsema ay weydiinaysay. Gaar ahaan talobixinta kuwa ugu sareeya ee daacadda u ah. Dhab ahaan, waa wax xiiso leh in la arko sida loogu magac daray iyo ceebaynta adeegsadayaashu ugu habboon tahay qaab taariikhi ah oo amarka la aasaasay (Christian) uu ku cambaareynayo isticmaalka daroogada laakiin uusan fahmin nuxurka waxa dhalinaya jiilka soo koraya.